EyeDwarha 13, 2018 admin
Coinbase uqinisekisa ukuvalwa ye crypto index fund
exchange crypto Coinbase iyavala imveliso yayo-umtyali index egxile fund. I Coinbase Index Fund - okokuqala ekuqaleni kwalo nyaka - ziya ngokusesikweni kuvalwa ekupheleni kwenyanga, nabaxumi kunokuba mayibhekiswe imveliso Coinbase Bundle kutshanje-isaziso endaweni.
I Coinbase uCaptain yathi: “Emva ekuhloleni angafuna neevenkile, abatyali accredited and kwamaziko, Coinbase ligqibe ukuvala Coinbase Index Fund. Siya kugxininisa ekuboneleleni sesichengeni ezahlukeneyo kubo bonke abatyali nge Coinbase Bundle.” Ngokungafaniyo fund index, esiqhumeni luvuleleke kubo bonke abathengi Coinbase, akukho igunya efunekayo. Le wotyalo-mali osezantsi efunekayo kuphela $25 njengokuba, kuthelekiswa ne $250,000 ukuba ingxowa-mali.
indlu esidlangalaleni Major Christie ukuba abhale ukuthengiswa zobugcisa kwi blockchain
London-based Christie kaThixo, enye yezindlu kwentengiso bobuciko neyona kuqatshelwe ehlabathini, ijikayo blockchain zobugcisa ukugcina ngokunqabisekileyo ukuthengiswa kunye provenance data. le nkampani, leyo unembali ndisiya 1766, umemezele ukukhululwa eendaba ngoLwesine ukuba isebenzisana blockchain-enikwe art yedijithali registry Artory lolingelo urekhodo zombhalo zentengiselwano esidlangalaleni.
Iprogram elingwayo ziya kubhalisa ezayo ekwindla intengiso Christie ngayo imisebenzi evela Barney A. Ebsworth Collection, ingqokelela ngasese-abanjwe kwinkulungwane yama-20 Modernist yaseMelika art, okulinganiselwa ukuba ayizise $300 yezigidi zamaphepha ewonke. platform blockchain Artory iya sigcine data evela kwintengiso ngalinye, kuquka isihloko nto leyo, incazelo, inani lokugcina kunye nomhla. Le sokuqalisa iya kunika isiqinisekiso yedijithali wo yingisela. Artory uthe kwisithuba blog ukuba irejistri yayo blockchain inikeza “nokuqinisekisa irekhodi digital yemicimbi, nge injongo yokubonelela ukuzithemba kakhulu provenance eqhubekayo an wobugcisa kunye ngempumelelo enkulu zokuthengiswa yayo ekugqibeleni.” inikeza Christie bamfikela 350 yemnyama.Iifandesi ngonyaka kunye nokuthengiswa zakuphatha of $4 billion kwisiqingatha sokuqala 2018.
Ingxelo Daily Market Kraken for 12.10.2018
$93.6M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
(Isilumkiso!) BITCOIN PRICES NEXT...
Post Previous:Blockchain News 12.10.2018
Post Next:Blockchain News 15.10.2018